သူ အနှဈသကျဆုံး ပရီးမီးယားလိဂျ မနျနဂြော တဈဦးကို ပွောပွလိုကျတဲ့ အကျသလကျတီကို နညျးပွ ဆီမှနျနီ - SPORTS MYANMAR
သူ အနှဈသကျဆုံး ပရီးမီးယားလိဂျ မနျနဂြော တဈဦးကို ပွောပွလိုကျတဲ့ အကျသလကျတီကို နညျးပွ ဆီမှနျနီ
အကျသလကျတီကို မကျဒရဈ နညျးပွ ဒီယဂေို ဆီမှနျနီ ဟာ အနျဖီး နဲ့ ဘိုရပျရှားဒေ့ါမှနျ တို့မှာ သူရဲကောငျး ဆနျဆနျ လုပျပွခဲ့တဲ့ လီဗာပူး မနျနဂြော ယာဂနျကလော့ကို ခြီးကြူး သှားခဲ့ပါတယျ။ ကလော့ဟာ လီဗာပူးကို စတငျ တာဝနျယူ ကိုငျတှယျ ခဲ့တဲ့ လေးနှဈတာ ကာလ အတှငျး အနျဖီးရဲ့ ကံကွမ်မာတှကေို လုံးဝ ပွောငျးလဲ ပေးနိုငျခဲ့ကာ လီဗာပူးဟာ ၎င်းငျး စတငျ ရောကျလာ ခဲ့စဉျက Top4အတှကျသာ အဓိက ရညျမှနျး နရေတဲ့ အသငျး ဖွဈခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျး မှာတော့ ထိပျတနျး အသငျး တှနေဲ့ ကှာဟခကျြကို လြော့ခြ နိုငျခဲ့တဲ့ အပွငျ အမှတျပေးဖလားကို စိနျချေါနိုငျတဲ့ အသငျး ဖွဈလာ ခဲ့ပွီး ကွိုးကွာနီ တို့ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက လိဂျပွိုငျပှဲမှာ ၉၇ မှတျထိ ရယူ နိုငျခဲ့ပွီး ခနျြပီယံဆုကို ၁ မှတျနဲ့ ကပျလှဲ ခဲ့ပါတယျ။
ကလော့ဟာ လီဗာပူး အသငျးကို ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီက ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား အောငျမွငျမှု ရယူ ပေးနိုငျ ခဲ့ပွီး ဒီရာသီ မှာလညျး ယူအီးအကျဖျအေ စူပါဖလား ကိုပါ ဆှတျခူး ပေးထား ခဲ့ကာ ဂြာမနျ နညျးပွဟာ သူ့ရဲ့ အသငျးဟောငျး ဒေ့ါမှနျ မှာတုနျးကလညျး ကွီးမားတဲ့ ဂုဏျပုဒျကို တညျဆောကျ နိုငျခဲ့ပွီး ဖွဈပါတယျ။
ကလော့ဟာ ဘိုငျယနျမွူးနဈ ရဲ့ လှမျးမိုးမှုကို ဖွတျကြျောကာ ဒေါ့မှနျ အသငျးကို ဘှနျဒကျလီဂါ ဖလား ၂ ကွိမျ ဆှတျခူး ပေးထားခဲ့တဲ့ အပွငျ ၂၀၁၃ ခုနှဈ ကလညျး ဒေ့ါမှနျကို ခနျြပီယံလိဂျ ဖိုငျနယျထိ ပို့ဆောငျ ပေးခဲ့ ပမေယျ့ ဗိုလျလုပှဲမှာ ဘိုငျယနျကို ရှုံးခဲ့တာကွောငျ့သာ ဒုတိယဆု နဲ့ ကနြေပျ ခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။
လီဗာပူးဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ ၈ ပှဲ ကစား ပွီးခြိနျမှာ ၈ ပှဲစလုံး အနိုငျရကာ ဒုတိယ နရောက အသငျးကို ၈ မှတျထိ ဖွတျထား နိုငျခဲ့တာကွောငျ့ နှဈ ၃၀ အတှငျး ပထမဦးဆုံး အကွိမျ အမှတျပေးဖလား ဆှတျခူး နိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ အားကောငျး လာခဲ့ပါတယျ။ အသကျ ၅၂ နှဈ အရှယျ ယခုလို စှမျးဆောငျ ပေးမှု တှကွေောငျ့ သူ့ရဲ့ ကစားသမားတှေ ပရိတျသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျမှု တှကေို ခံနရေပါတယျ။
အကျသလကျတီကို မကျဒရဈကို ခနျြပီယံလိဂျ ဖိုငျနယျ ၂ ကွိမျ ပို့ဆောငျ ပေးခဲ့ပွီး လာလီဂါ နဲ့ ယူရိုပါလိဂျ ဖလားတှေ ဆှတျခူး ပေးခဲ့တဲ့ ဆီမှနျနီ လို နညျးပွ ကတောငျမှ ကလော့ကို ခြီးကြူး ဂုဏျပွု ခဲ့ပါတယျ။ အထူး သဖွငျ့ ဆီမှနျနီဟာ သူ့ မနျနဂြော ဘဝမှာ ကလော့ရဲ့ ကစားဟနျ ကို အထူး နှဈသကျနခေဲ့ပွီး လီဗာပူး နညျးပွဟာ သူ အနှဈသကျဆုံး နညျးပွ ဖွဈတယျလို့ ထုတျဖျော လိုကျပါတယျ။
Spain radio station Cadena Ser နဲ့ တှဆေုံ့ မေးမွနျးခနျးမှာ ဆီမှနျနီ က “ကြှနျတျော အနှဈသကျဆုံး နညျးပွလား ? ယာဂနျကလော့ ပါပဲ။ လုံးဝ အကွှငျးမဲ့ ပါပဲ။ သူဟာ အရာ တျောတျောမြားမြား ရှုံးနိမျ့ ခဲ့သလို လှပတဲ့ အောငျမွငျမှုတှလေညျး ရခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူဟာ အမွဲတမျး တူညီတဲ့ စတိုငျနဲ့ပဲ သှားပါတယျ။ ပွီးတော့ သူဟာ သူ့ကစားသမားတှေ နဲ့ အရမျးကို ရငျးနှီးဖျောရှတေဲ့ ဆကျဆံရေး ရှိနတောကို ကြှနျတျော တှနေ့ရေ ပါတယျ။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
ကလော့ဟာ ကဏ်ဍ အမြိုးမြိုးမှာ great manager အဖွဈ သတျမှတျ ခံထား ရသူ ဖွဈပမေယျ့ ဆီမှနျနီလို နညျးပွ တဈဦးရဲ့ ယခုလို ပွောဆိုမှု ကတော့ အကောငျးဆုံး သကျသေ တဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကလော့ဟာ သူကိုယျတိုငျ အရညျအသှေးမွငျ့ နညျးပွ တဈဦး ဖွဈနရေုံ သာမက ကစားသမားတှနေဲ့ အရမျး ကောငျးတဲ့ ဆကျဆံရေးကွောငျ့ သူ့အသငျးဟာ ပှဲတဈပှဲကို အစှမျးကုနျ ပေးဆပျ ကစားလေ့ ရှိပွီး အရေးကွီးဆုံး ကတော့ ပရိတျသတျတှရေဲ့ တဈခဲနကျ ထောကျခံ အားပေးမှုကိုပါ ရနတော ဖွဈပါတယျ။
ကလပျရဲ့ အစိတျအပိုငျး ပေါငျးစုံမှာ လီဗာပူးဟာ ဦးတညျခကျြ တဈခုတညျး ဖွဈနပွေီး ဒါတှေ တျောတျောမြားမြားဟာ ကလော့ ရဲ့ စှမျးဆောငျခကျြတှေ ဖွဈပါတယျ။
သူ အနှစ်သက်ဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် မန်နေဂျာ တစ်ဦးကို ပြောပြလိုက်တဲ့ အက်သလက်တီကို နည်းပြ ဆီမွန်နီ
အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် နည်းပြ ဒီယေဂို ဆီမွန်နီ ဟာ အန်ဖီး နဲ့ ဘိုရပ်ရှားဒေ့ါမွန် တို့မှာ သူရဲကောင်း ဆန်ဆန် လုပ်ပြခဲ့တဲ့ လီဗာပူး မန်နေဂျာ ယာဂန်ကလော့ကို ချီးကျူး သွားခဲ့ပါတယ်။ ကလော့ဟာ လီဗာပူးကို စတင် တာဝန်ယူ ကိုင်တွယ် ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်တာ ကာလ အတွင်း အန်ဖီးရဲ့ ကံကြမ္မာတွေကို လုံးဝ ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်ခဲ့ကာ လီဗာပူးဟာ ၎င်း စတင် ရောက်လာ ခဲ့စဉ်က Top4အတွက်သာ အဓိက ရည်မှန်း နေရတဲ့ အသင်း ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်း မှာတော့ ထိပ်တန်း အသင်း တွေနဲ့ ကွာဟချက်ကို လျော့ချ နိုင်ခဲ့တဲ့ အပြင် အမှတ်ပေးဖလားကို စိန်ခေါ်နိုင်တဲ့ အသင်း ဖြစ်လာ ခဲ့ပြီး ကြိုးကြာနီ တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက လိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ၉၇ မှတ်ထိ ရယူ နိုင်ခဲ့ပြီး ချန်ပီယံဆုကို ၁ မှတ်နဲ့ ကပ်လွဲ ခဲ့ပါတယ်။
ကလော့ဟာ လီဗာပူး အသင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီက ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား အောင်မြင်မှု ရယူ ပေးနိုင် ခဲ့ပြီး ဒီရာသီ မှာလည်း ယူအီးအက်ဖ်အေ စူပါဖလား ကိုပါ ဆွတ်ခူး ပေးထား ခဲ့ကာ ဂျာမန် နည်းပြဟာ သူ့ရဲ့ အသင်းဟောင်း ဒေ့ါမွန် မှာတုန်းကလည်း ကြီးမားတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို တည်ဆောက် နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကလော့ဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ဖြတ်ကျော်ကာ ဒေါ့မွန် အသင်းကို ဘွန်ဒက်လီဂါ ဖလား ၂ ကြိမ် ဆွတ်ခူး ပေးထားခဲ့တဲ့ အပြင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ကလည်း ဒေ့ါမွန်ကို ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ်ထိ ပို့ဆောင် ပေးခဲ့ ပေမယ့် ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဘိုင်ယန်ကို ရှုံးခဲ့တာကြောင့်သာ ဒုတိယဆု နဲ့ ကျေနပ် ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ၈ ပွဲ ကစား ပြီးချိန်မှာ ၈ ပွဲစလုံး အနိုင်ရကာ ဒုတိယ နေရာက အသင်းကို ၈ မှတ်ထိ ဖြတ်ထား နိုင်ခဲ့တာကြောင့် နှစ် ၃၀ အတွင်း ပထမဦးဆုံး အကြိမ် အမှတ်ပေးဖလား ဆွတ်ခူး နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်တွေ အားကောင်း လာခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၅၂ နှစ် အရွယ် ယခုလို စွမ်းဆောင် ပေးမှု တွေကြောင့် သူ့ရဲ့ ကစားသမားတွေ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှု တွေကို ခံနေရပါတယ်။
အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ်ကို ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ် ၂ ကြိမ် ပို့ဆောင် ပေးခဲ့ပြီး လာလီဂါ နဲ့ ယူရိုပါလိဂ် ဖလားတွေ ဆွတ်ခူး ပေးခဲ့တဲ့ ဆီမွန်နီ လို နည်းပြ ကတောင်မှ ကလော့ကို ချီးကျူး ဂုဏ်ပြု ခဲ့ပါတယ်။ အထူး သဖြင့် ဆီမွန်နီဟာ သူ့ မန်နေဂျာ ဘ၀မှာ ကလော့ရဲ့ ကစားဟန် ကို အထူး နှစ်သက်နေခဲ့ပြီး လီဗာပူး နည်းပြဟာ သူ အနှစ်သက်ဆုံး နည်းပြ ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ဖော် လိုက်ပါတယ်။
Spain radio station Cadena Ser နဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်းမှာ ဆီမွန်နီ က “ကျွန်တော် အနှစ်သက်ဆုံး နည်းပြလား ? ယာဂန်ကလော့ ပါပဲ။ လုံးဝ အကြွင်းမဲ့ ပါပဲ။ သူဟာ အရာ တော်တော်များများ ရှုံးနိမ့် ခဲ့သလို လှပတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေလည်း ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အမြဲတမ်း တူညီတဲ့ စတိုင်နဲ့ပဲ သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ သူဟာ သူ့ကစားသမားတွေ နဲ့ အရမ်းကို ရင်းနှီးဖော်ရွေတဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိနေတာကို ကျွန်တော် တွေ့နေရ ပါတယ်။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
ကလော့ဟာ ကဏ္ဍ အမျိုးမျိုးမှာ great manager အဖြစ် သတ်မှတ် ခံထား ရသူ ဖြစ်ပေမယ့် ဆီမွန်နီလို နည်းပြ တစ်ဦးရဲ့ ယခုလို ပြောဆိုမှု ကတော့ အကောင်းဆုံး သက်သေ တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလော့ဟာ သူကိုယ်တိုင် အရည်အသွေးမြင့် နည်းပြ တစ်ဦး ဖြစ်နေရုံ သာမက ကစားသမားတွေနဲ့ အရမ်း ကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးကြောင့် သူ့အသင်းဟာ ပွဲတစ်ပွဲကို အစွမ်းကုန် ပေးဆပ် ကစားလေ့ ရှိပြီး အရေးကြီးဆုံး ကတော့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် ထောက်ခံ အားပေးမှုကိုပါ ရနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလပ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ပေါင်းစုံမှာ လီဗာပူးဟာ ဦးတည်ချက် တစ်ခုတည်း ဖြစ်နေပြီး ဒါတွေ တော်တော်များများဟာ ကလော့ ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။